नेपाल र यूएईबीच श्रम समझदारी, के छन् समझदारीमा ? « Kakharaa
नेपाल र यूएईबीच श्रम समझदारी, के छन् समझदारीमा ?
काठमाडौं । नेपाल र यूएईबीच पुनः श्रम समझदारी भएको छ । कामदार छनोट र भर्ना प्रक्रियामा लाग्ने सबै शुल्क एवं लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने गरी समझदारी भएको हो । स्विट्जरल्याण्डको जेनेभामा सम्पन्न एक बिशेष कार्यक्रमका बिच नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र युएईका मानव संशाधन मन्त्री नासेर थानी अल हम्लीले सो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे ।